कपिलवस्तु जिल्लामा भेटीए अच्च**मका यस्तो बाबू । अनुहार छ यस्तो फरक । बास्तबिकता यस्तो,Tik Tok मा भा**इरल ( सहयोग काे लागि सेयर गराै ) -
Home News कपिलवस्तु जिल्लामा भेटीए अच्च**मका यस्तो बाबू । अनुहार छ यस्तो फरक ।...
कपिलवस्तु जिल्लामा भेटीए अच्च**मका यस्तो बाबू । अनुहार छ यस्तो फरक । बास्तबिकता यस्तो,Tik Tok मा भा**इरल ( सहयोग काे लागि सेयर गराै )
कपिलवस्तु जिल्लामा भेटीए अच्चमका यस्तो बाबू । अनुहार छ यस्तो फरक । बास्तबिकता यस्तो,Tik Tok मा भाइरल
तेरो छोरीले गाउँको नाम फा’ल्यो ।परिवारको नाक का’ट्यो,’ भन्नेहरु सपनालाई ब’धाई दिन घरमै आए
काठमाडौँ — बुटवलका मन्दिर, प्रहरी चौकीको प्रतिक्षालय, ट्राफिक चोक, चौराह । कुनै बेला यतै भेटिन्थिन् उनी । १५ वर्षकै उमेरमा जीवनका तीता भो’गाइले उनलाई सडकमा पुर्‍यायो । आकाशलाई छानो जमिनलाई ओ’छ्यान बनाएर बुटवलका गल्ली र चोकहरुमा उनले तीन महिना बिताइन् । सानो उमेरमै सडकको जिन्दगी भोगेकी उनी हुन् सपना रोका मगर ।दिनभर टोलाइरहन्थिन् सपना । चिच्याएर रुन खोज्थिन् तर आवाज भित्रै हराउँथ्यो । के भइरहेको छ, सोच्न सक्ने अवस्था थिएन ।भोकै रात का’ट्थिन् । शरीरमा पाइन्ट, टिसर्ट अनि ज्याकेट ।
लगलग काम्दै जाडोको त्यो समय एकै ठाउँमा नबोली बस्थिन् । ओठबाट हाँसो खो’सिएको थियो । बोली ब’न्द भएको थियो । कसैले बोलाउँदा पनि झसंग हुन्थिन् । कतै परबाट बोलाएझैं कानमा अरुको बोली ठो’किन्थ्यो । निन्द्रा हराएको थियो । दया गरेर कसैले दिएको खानाले पेट भर्थिन् ।त्यो पनि नपाउँदा ६/७ दिनसम्म भोकै बस्थिन् । भोकले रन्थनिँदा मनमनै कसैले एक छाक दिए हुन्थ्यो भन्ने प्रार्थना गर्थिन् । पानी पिएरै भोक मेट्न खोज्थिन् । अनि सानो डायरीमा कलमले कोरिबस्थिन् । दिनभर सडकमै बिताए पनि रातमा प्रहरी चौ’कीको प्रतिक्षालय पुग्थिन् उनी ।
कारण, कसैले गलत नजरले हेरे प्रहरीलाई गु’हार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो उनलाई ।’सडकमा जीवन बिताउने छोरी मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ । चौकी बाहिर रात क’टाए, केही भयो भने प्रहरी चौ’कीमा प्रहरीहरु त हुनुहुन्छ भन्ने हुन्थ्यो,’ सडकको जीवन सम्झँदै सपना सुनाउँछिन्,’ढोकामा उभिने एकजना प्रहरी दाइले सँधै मलाई हेरिरहनुहुन्थ्यो । साँझ पर्नेबित्तिकै आइपुग्छ, कसको छोरी होला, कहाँबाट आइन् होला भन्ने सोच्दो हो ।’त्योबेला उनको शरीरको तौल घ’टेर ३२ किलो भयो ।एकदिन सपनालाई स’हनै नसक्ने भोक लाग्यो ।
बिस्कुट के खान लागेकी थिइन् उनको ध्यान छेउमै रो’इरहेको अ’नाथ बच्चातिर गयो । आफूले खाँदै गरेको बिस्कुट त्यो बालकलाई दिइन् । त्यतिखेर झल्याँस्स म्याग्दीमा रहेका आमाबुबाको झल्को आयो । ‘धेरै याद आयो उहाँहरुको । कान्छी छोरी मलाई घरमा सबैले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो । खाना नखाँदा ज’बरजस्ती खुवाउनु भएको दिनको याद आयो,’ सपनाले सुनाइन् ।त्यसपछि सपनाले सडक छो’ड्ने निर्णय लिइन् । सोचिन्, ‘म यस्तो मान्छे त होइन, के बि’ग्रेको छ ग’ल्ती सबैले गर्छन् । मैले मेरो गल्ती सु’धार्नुपर्छ ।’त्यसपछि उनले आ’त्मविश्वास बढाएर सडकको जिन्दगी त्या’गिन् ।
विद्यालय पढ्दै गर्दा सपनाको हातमा मोबाइल पर्‍यो । कक्षा ९ मा फेसबुक खोलिन् । नयाँ साथीहरु भेटिन् । नराम्रो साथी संगतमा रमाउन थालिन् । २०७३ मा श्री महेन्द्र रत्न उच्च माध्यमिकबाट एसएलसी दिएर कलेज पढ्न बेनी आइन् । भर्चुअल संसारमै रमाउन थालिन् उनी ।फेसबुकबाटै भेटेको एक व्यक्तिसँग बिहेको सम्बन्ध गाँ’सियो । तर, त्यो सम्बन्धलाई बिहे मान्दिनन् उनी । ‘बिहेकै रुपमा त्यसलाई लिँदिनँ । कसैको जिन्दगी स’पार्न कसैको जिन्दगी प्रयोग गरिएको थियो । म प्रयोग भएँ त्यो ठाउँमा,’उनले सुनाइन्,’घर परिवार कसैले सु’धार्न नसकेको व्यक्तिलाई बिहे गरिदियो भने सु’ध्रिन्छ भन्ने उसको परिवारलाई लाग्थ्यो । त्यो प’रिबन्धमा सम्बन्ध जो’डियो ।’
त्यतिबेला उनलाई पनि सु’धार्न सक्छु भन्ने लागेको रहेछ । तर, एकअर्काप्रति क’दर नभएपछि तीन महिनामै सम्बन्ध टु’ट्यो । त्यो बेला ‘विवाह’लाई खैलौनाको रुपमा लिइएको उनी सुनाउँछन् । सम्बन्ध टु’टेपछि म्याग्दी फर्किन् उनी । आमाले बिहे भएको छोरी पतिकै घरमा बस्नुपर्ने सल्लाह दिएपछि उनी फेरि त्यो सम्बन्धमा फर्किन् । २ वर्षअघिको तीजमा घर फर्कँदा उनीमाथि नराम्रो व्य’वहार गरियो । यातना दिइयो ।त्यो सम्बन्ध टु’टेपछि उनको मनमा मर्ने सोचहरु मात्र आउन थाल्यो । धेरै पटक आ’त्म’ह’त्या’को प्रयास गरिन् । जीवनदेखि हा’रेर कहिले पङ्खामा पा’सो लगाइन् त कहिले छतको डिलमा आँखा ब’न्द गरेर हिँडिन् ।
तर, उनको म’र्ने हर प्रयास असफल भयो । त्यसपछि हो सपना सडकमा आएको ।समाजले अनेक कुरा गर्थे । सेतो कापीमा लागेको दागझैं आफ्नो जिन्दगीमा त्यो सम्बन्धले बनाइदिएको दा’गले उनलाई अ’र्धपागल नै बनायो । ‘फ्र’स्टेसनजस्तो आ’खिर के नै गर्न सकें र भनेर धेरै टोलाउँथे । डि’प्रेसनजस्तो अनुभव। गाह्रो भयो बाँच्न,’ सडक जीवन सम्झन्छिन्,’साँझ नि’दाए भने भोली उठ्छ उठ्दैन ठेगान हुन्थेन। बेलाबेला बे’होस् हुन्थें ।’सडकको त्यो जीवन सम्झँदा आज पनि उनको मनमा चिसो पस्छ । ‘पी’डा सुनिदिने मानिस कोही होस् ।
कसैले मेरो पी’डा सुनिदिओस् भन्ने लाग्थ्यो । तर सडकको मान्छेसँग को बोल्न आउँथ्यो र ?’ अ’वरुद्ध ग’लामा उनले प्रश्न गरिन् ।सडकबाट म्याग्दी फर्केर उनले १२ को पढाइ सकिन् । त्यसपछि बे’वारिसे श’व व्यवस्थापनमा विनयजंग बस्नेतसँग मिलेर काम गर्न थालिन् । विनयजंगलाई एसएलसी दिनु अ’गावै चिन्थिन् उनी । आफूले पनि सडकको जिन्दगी बिताएकै कारण बे’वारिसे श’व व्यवस्थापनमा सं’लग्न भइन् । ‘हिजो समयमा त्यसरी नै हिँडेको भए के थाहा म बे’वारिसे भएर म’र्नु पो पर्थ्यो कि । त्यही कारणले मेरो जीवनसँग मेल खाएको र मानव सं’वेदनासँग जोडिएको भएर यो सेवामा लागें ।
बे’वारिसे ला’स भन्नेबित्तिकै पारिवारिक आ’त्मियताको अनुभव हुन्छ,’ उनले सुनाइन् ।तीन वर्षदेखि श’व व्यवस्थापनमा सक्रिय सपना १ वर्षयता फ्रन्टलाइनमा रहेर दा’गबत्ती दिइरहेकी छिन् । अहिलेसम्म सयभन्दा बढी बे’वारिसे श’वको स’दगत गरिसकिन् सपनाले । विनयसँग मिलेर भने ३ सयभन्दा बढी श’वको स’द्गत गरिसकेको उनी बताउँछिन् ।कुनै समय छोरीले श’व आएको बाटो देख्यो भने त्यता फ’र्किनु हुँदैन भनेर आमाले सपनालाई लु’काउँथिन् । तर, अहिले सपनाको क’र्मभूमि नै आ’र्याघाट बनेको छ ।१७ वर्षको उमेरमा उनले पहिलो पटक १७ वर्षकै बे’वारिसे युवतीको स’दगत गरेकी थिइन्।
‘उसको अनुहार हेर्दा झ’स्केको थिएँ म । त्यो बेला म पनि १७ वर्षकै थिएँ। हिजोको समयमा म सडकमै म’रेको भएँ । आज यही ला’सको ठाउँमा म पो हुन्थें कि । भा’वुक पनि भएँको थिएँ,’ आफ्नो अनुभव सुनाइन् ।पछिल्लो समय उनलाई बे’वारिसेको उ’पनाम नै दिइएको छ । बे’वारिसे व्यवस्थापन तथा पु’नर्जीवन केन्द्रमा आ’बद्ध सपनाको नाम हालै बेलायती सञ्‍चारमाध्यम बीबीसीले सार्वजनिक गरेको विश्वभरका सय प्रे’रणादायी महिलाको सूचीमा पर्‍यो ।’तेरो छोरीले गाउँको नाम फा’ल्यो । परिवारको नाक का’ट्यो,’ भन्ने आफन्तहरु त्यस दिन बिहानै सपनालाई ब’धाई दिन घरमै आए ।
सपनाकी आमाबुवालाई ब’धाई दिँदै भन्दै थिए, ‘सपनाले गाउँकै नाम राख्यो । विश्वमा सपना कहाँको भन्यो भने म्याग्दीको भनेर कुरा आउँछ।’ त्यतिबेला आमा खाना खाँदै थिइन् । खाँदै गरेको गाँससँगै आमा खुसीले रोइन् । बुबा पनि पहिलो पटक त्यसरी खुसीले रोए’को देख्दा आफूले जीवनमा केही उपलब्धि पाएको भन्ने सपनालाई लाग्यो । अघिल्लो दिन रातिसम्म पारिपट्टि गाउँमा अ’पाङ्ग/असक्तलाई खाद्यान्न बाँ’ड्न व्यस्त भएकी सपनाले भने ओछ्यानमै हुँदा त्यसबारे खबर पाएकी थिइन् ।विदेशबाट दाइ र दिदीको बधाई पाइन् ।
राज्यले आफ्नो कामको मूल्यांकन नगरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले गरेको बताउँछिन् सपना । ‘दिनरात भोक प्या’स नभनिकन हामी ख’टिरहेका थियौं । खाना खाने, पानी पिउने फु’र्सद हुँदैन थियो । त्यसरी हिँ’ड्ने क्रममा राज्यले मूल्यांकन गरेन,’ उनले भनिन्, ‘बीबीसी जस्तो ठूलो मिडियाले हाम्रो मूल्यांकन गरिदियो । एकदमै खुसी छु ।’कहिले रातको १ बजे उठेर श’वको व्यवस्थापनमा गर्छिन् त कहिले लासलाई दा’गबत्ती दिएर १२ बजे ओ’छ्यान पस्छिन्। बे’वारिसे श’व भेटियो या अ’लपत्र परेका मानिसहरु भेटिए भने सुरुमै सपना र विनयको फोन बज्छ ।
रातभर बे’वारिसे ला’स व्यवस्थापन बिताएका दिनहरु कै’यन छन् ।केही दिनअघि मात्रै ललितपुरमा बे’वारिसे श’व भेटिएको भन्दै प्रहरीले विनय र सपनालाई डा’के । रातको १ बजे म’स्त नि’न्द्रामा थिइन् सपना । प्रहरीले श’व दु’र्गन्धित भइसकेको भनेपछि उनी दुई त्यति नै बेला उ’ठेर व्यवस्थापनमा लागिन् । ‘१ बजे गएका हामी लगभग बिहान ५ बजे पो’स्ट’म’र्ट’म’को प्रक्रिया हुँदाहुँदै ६ बजेतिर ला’स ज’लाउन सुरु भयो,’ उनले भनिन् ।छोरीले दा’गबत्ती दिने मान्यता छैन हिन्दु परम्परामा । तर १ वर्षयता सपनाले त्यो मान्यता तो’डेर बे’वारिसेको से’वा गर्दै आएकी छिन् ।
उनले पहिलो पटक स’द्गत गर्दा आमासँग अनुमति मा’गेकी थिइन् । उनलाई आमाले बे’वारिसेको स’द्गत गर्नु भाग्यको कुरा रहेको भन्दै हौ’सला दिइन् । तर समाजले मृ’तकको जात नबुझी स’द्गत गरेको भन्दै उनको कुरा काट्थे । ‘छोरी मान्छेले स’द्गत गरेको देख्दा त्यो श’वको आ’त्माले मु’क्ति पाउँदैन’ भन्ने कुरा नसुनेका होइनन् । तर उनलाई लाग्छ,’वर्षौंदेखि स’डेर, ग’लेको श’वले दा’गबत्तीको आ’स गरेको हुन्छ ।’हरेक परिवारमा छोराकै जन्म हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले छोरीले पनि दा’गबत्ती दिनुहुन्न भन्ने कुरा चि’र्दै उनी अगाडि बढिन् ।
उनका बुवाआमा तीनै छोराछोरीको हातबाट दा’गबत्ती लिने कुरा गर्छन् । ‘हामी म’र्‍यौं भने त हाम्रो ड’ल्ली रुँदा पनि रुँदिन होला भन्नुहुन्छ । त्यतिका लासलाई दा’गबत्ती दिइसकिन् भनेर आमाबुवाले जि’स्काउनु हुन्छ,’ उनले सुनाइन् ।बे’वारिसेको श’व धुँ’वामा परिणत भइरहँदा कस्तो अनुभव हुन्छ ? प्रश्न गर्दा जवाफमा उनले भनिन्,’खुसी लाग्छ । कति समयदेखि खु’म्चेर बसेको शरीरमा दा’गबत्ती दिन्छौं हामी । उसको स’द्गत गरिएको शरीर खु’ल्दै हावामा उ’ड्दै जान्छ । अब उसको क’र्मअनुसार स्व’र्ग वा न’रक जान्छ भन्ने लाग्छ ।’अब स’पनाले स्नातक पढ्ने सोचेकी छिन् ।
आफ्नो जीवनलाई बे’वारिसेकै व्यवस्थापनमा स’मर्पित गर्ने उनको सपना छ । अ’लपत्र सकडका बे’वारिसेलाई हाँ’स्न सिकाउने सपना जिन्दगीसँग हा’र्नेहरुलाई हि’म्मत न’हार्न हौ’सला दिन्छिन्, ‘हिजो म मा’ग्नेसमेत भएको थिएँ । कसैले चि’न्न नसक्ने भएको मान्छे अहिले सबैसँग कुरा गर्न सकेकी छु । त्यसैले सबैलाई हि’म्मत न’हार्नुहोस् भन्न चाहन्छु ।’ कान्तिपुर
Previous articleके सोच्दैछ चिन ?एक्कासि किन उठ्यो सन्धिको कुरा ?? १९५० को सन्धिमा के छ भारतको दाउ ??
Next articleमंसिर २२ गते वैवाहिक बन्धनमा बाधिँदै रमेश प्रसाईं , यी हुन दुलही ( बधाई स्वरुप सेयर गराै )